Ukushisa kokuqala eSpain kubeka izifundazwe ezingama-34 ekuxwayiseni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kudlula kushisa? Okwezinsuku ezimbalwa amazinga okushisa eSpain afinyelela emazingeni okushisa ajwayelekile kakhulu ngoJulayi / Agasti kunengxenye yesibili kaJuni. Amazinga okushisa azokhuphukela ku-42 degrees Celsius ezifundeni eziningi, njengoba kunjalo naseningizimu ye-Andalusia noma eCastilla La-Mancha.
Yize ihlobo liqala ngokusemthethweni ngoJuni 21, kubukeka sengathi lo nyaka unezinsuku eziyisithupha ezizayo, okuyinkinga, ikakhulukazi ezinganeni ezikumahora okufunda. Ukuquleka ezikoleni bekulokhu noticia. Uma kushisa kangaka, into ebaluleke kakhulu ukuphola, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngabancane. Lesi yisimo sezulu eSpain kulezi zinsuku.
1 Ngisiphi isikhathi esilindelwe namhlanje?
2 Futhi ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo?
3 Futhi eCanary Islands?
Ngisiphi isikhathi esilindelwe namhlanje?
Isibikezelo samazinga okushisa aphezulu ngoLwesihlanu ngoJuni 16, 2017. Isithombe - AEMET
NgoJuni 14, i-State Meteorological Agency yanikeza i- isaziso: igagasi lokushisa lingathinta i-quadrant eseningizimu-ntshonalanga yenhlonhlo nendawo emaphakathi nenhlonhlo, ngezinga lamathuba amakhulu kunama-80%. Usuku lokuqala kwakunguJuni 15, futhi usuku lokuphela kwaba ngoMsombuluko olandelayo, ngoJuni 19. Futhi kuye kwaba njalo.
Namuhla ezifundazweni zase ICórdoba, iGranada, iHuelva, iJaén neSeville njengamanje baphapheme ngamawolintshi (ubungozi obukhulu) ngenxa yama-maximums azoba phakathi kuka-38 no-41ºC, ngenkathi eCádiz kunesixwayiso esiphuzi (ingozi) yamanani ka-38ºC, ngenxa yomoya waseLevante ezindaweni ze-Strait nangenxa yezimo zasogwini.
UCastilla La-Mancha unesixwayiso esiwolintshi ngamazinga okushisa angafika ku-40ºC ezigodini zaseTagus naseGuadiana. Ngokwesinye isandla, IMadrid igcina isexwayiso se-orange endaweni yedolobha, ngamanani angafika ku-39ºC; futhi en U-Extremadura uyaqhubeka nesixwayiso esiwolintshi ngobuningi obungu-42ºC.
Futhi ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo?
Isibikezelo samazinga okushisa sangoMgqibelo ngoJuni 17, 2017. Isithombe - AEMET
Isibikezelo samazinga okushisa ngeSonto ngoJuni 18, 2017. Isithombe - AEMET
Ngempelasonto zombili iNhlonhlo Yase-Iberia neBalearic Islands zizoqhubeka nokushisa. NgoMgqibelo amazinga okushisa azoqhubeka nokukhuphuka enyakatho yePeninsula, kuthi ngeSonto anyuke kancane e-Alto Ebro nakwezinye izindawo ezisenyakatho. Eningizimu-mpumalanga ye-peninsula nasempumalanga ye-Balearic Islands, amazinga okushisa azoqala ukwehla.
Futhi eCanary Islands?
Iziqhingi ezinenhlanhla zibonakala zikususa kancane ukushisa okukhulu. Izinga lokushisa eliphakeme lizungeze u-30-32ºC, kanti ubuncane lingu-10-12ºC Azikho izinguquko ezinkulu ezilindelekile kulezi zinsuku.
Ngakho-ke akukho lutho, amanzi amaningi bese ulinda ukudlula kwegagasi 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Ukushisa kokuqala eSpain kubeka izifundazwe ezingama-34 ekuxwayiseni
Imfihlakalo yamafu anyamalalayo angabonakali noma i-CEN kanye NOKUQALA OKUYINKINGA KWALE GAGASI ELIFANELEKILE LOKUSHISA:
NgoJuni 15, 2017 - Ngasekupheleni kukaMeyi 2017, izingqapheli eYurophu zaqala ukubona imicu kagesi eluhlaza okwesibhakabhaka inyonyobela umkhathizwe osentshonalanga lapho kushona ilanga. Isikhathi sasehlobo samafu amnyama (CEN) ngokusobala sasiqala. Amafu abukeka ngendlela engajwayelekile akhulisa ukubonakala kwawo emavikini ngemuva nje kokubona kwawo kokuqala. Kulo nyaka, noma kunjalo, kwenzeka okuthile okungaqondakali. Esikhundleni sokuya phezulu, amafu anyamalala. Emasontweni amabili okuqala kaJuni 2017, izithombe ze-ZERO ezivela kwaCEN zamukelwa ku-Spaceweather.com - into engakaze yenzeke eminyakeni ecishe ibe ngu-20.
Bayaphi? Abaphenyi bavele bathola: Kube khona "ukushisa okushisayo" endaweni esezindaweni ezisemaphandleni ye-mesosphere, okuyisifunda esisemkhathini womhlaba lapho kwakhiwa khona ama-CEN. Amazinga okushisa afudumele aqede amafu.
U-Lynn Harvey we-University of Colorado's Laboratory for Atmospheric and Space Physics wenze lokhu kutholakala esebenzisa imininingwane yamazinga okushisa avela kwi-Microwave Probe eyayisesithelwaneni se-Aura se-NASA. "Ekuqaleni kukaMeyi, i-mesosphere yasehlobo yemisebe yelanga yayiphola, njengenjwayelo, isondela emazingeni okushisa aphansi adingekayo eCEN," usho kanje. “Kodwa awazi? Ngemuva nje kukaMeyi 21, ukuphola kwamazinga okushisa kwama phezu kwesigxobo esisenyakatho! Eqinisweni, kufudunyezwe yizifunda ngezinga elithile noma amabili ngaphezulu ngesonto elizayo. Ukufudumala okuhunyushelwe ku-2017 kwaba yihlobo ELISHESHELA kakhulu esikhathini sokuqeda iminyaka eyishumi edlule. "
Uchaza ijika elibomvu kulesi sakhiwo seminyaka eyi-10 yokuvela kwamazinga okushisa asendaweni ephakeme:
Amazinga okushisa afudumele kulezi zindawo eziphakemeyo abucayi kwiCEN. Amafu eqhwa akha amakhilomitha angama-83 ngenhla koMhlaba lapho izinga lokushisa lomoya lehla ngaphansi kuka-145 K (-128 C), livumela ama-molecule wamanzi amancane ukuba aqoqane futhi afane nezicucu zomusi wemeteor. Ngisho neziqu ezimbalwa zokufudumala zanele ukubhubhisa amafu entekenteke.
"Asazi ukuthi kungani i-mesosphere ifudumele, kepha zonke izinkomba zikhomba ekwandeni kokufika kweCosmic-Rays yangaphandle kuSolar System," kusho uCora Randall, ongusihlalo weNyuvesi eMnyangweni we-Atmospheric ne-Ocean Sciences eColorado. “Kungenzeka ukuthi inqubo eyinkimbinkimbi futhi ehilela ukusakazeka kwamagagasi asemkhathini, okuthinta ukuhamba komoya emkhathini ongaphezulu. Siyayibheka ngakho-ke ibuye ihambisane neSolar-Cycle yamanje ephansi ngendlela engajwayelekile. "
Okwamanje, igagasi lokushisa lingahle liphele. "Esontweni eledlule, i-pole pole mesopause iqale ukuphola futhi," kusho uHarvey. Lokhu kusho ukuthi i-CEN ngaphambi kokubuya izolulama ngokushesha, njengoba amazinga okushisa eqhubeka nokwehla kuleyo ndawo yomkhathi wePole Pole. Abaqaphi beSky High latitude kufanele babheke ama-tendrils kagesi akhasa elangeni elishonayo ngobusuku obulandela ihlobo
Izabelomali zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu zehle ngo-16%
Iyini i-solstice yasehlobo?